ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: နွားဖြူနွားနက် သံယောဇဉ်
ထွန်း။ “နားသည် သောတာရုံ အသံ ၏ … နှာခေါင်းသည် ဂန္ဓာရုံ အနံ့၏ … လျှာသည် ရသာရုံ အရသာ၏… ကိုယ်သည် ဖောဌဗ္ဗာရုံ အထိအတွေ့ ၏… စိတ်သည် မနောအာရုံ စိတ်ဖြစ်စဉ်တို့၏…ထမ်းပိုးကြိုး ဖြစ်သည်” လို့ ပြောရင် မှန်ပါသလား။
ဆွေ။ ထေရဝါဒဘက် က ခင်ဗျား သီအိုရီက တယ်လည်း ဟုတ်ပါလား။ ကိုယ်ကျိုးစွန့်တယ် ဆိုတာ အဆင်ခြင်ဥာဏ် မရှိရင် အကြီးဆုံး အတ္တပုံရိပ်ကြမ်းကြီး။ သည် ပုံရိပ်ကြမ်းကြီးဟာလည်း အုပ်စီးလိုတဲ့ ဆန္ဒ နဲ့ လောဘကို အခြေခံထားတာ ပါပဲ။ ကိုယ်ကျိုးစွန့်လို့ စစ်ထဲဝင်တယ် ဆိုတဲ့ ကျုပ်တို့ စစ်ဗိုလ်ချုပ် အဘတွေ ဘယ်လောက်တောင် အုပ်စီးချင် ၊ ဆန္ဒ လောဘကြီးလာ လိုက်ပေသလဲ။
Very good piece of writing indeed.
Au Gyi said...
Nyo tun, You can write what you want, U Wirathu says what he wants, so I giveacomment, cause I want!
Ma May yee San said...
should have to detain the ego so that become the closest to have the real peace
ဘယ်အကောင်းလဲကွ ဒီဆောင်းပါးကိုရေးတာ။ မင်းဘာကောင်လဲ.. မင်းဆွေးနွေးချင်ရင် ဒီဖုန်းနံပါတ်ဆက်လိုက် ..၀၈၁၆၇၈၃၇၀၀။။
အရမ်းကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါးပါ ဆရာ ညိုထွန်းရေ… မိုးကုတ်ဆရာတော် ဘုရားကြီး လယ်တီဆရာတော် ဘုရားကြီး အစရှိတဲ့ ဆရာတော်ကြီးများ ဝိမုတ္တိသာသနာတော်ကို မြန်မာပြည်မှာ ခက်ခက်ခဲခဲ ထူထောင်ပေးခဲ့တာ ဘာသာရေးကို အပေါ်ယံသာသိပြီး လောဘ ဒေါသ မောဟ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ လူတွေကြောင့် ပြည်သူများလဲ အမိုက်မှောင်တွေ ဖုံးလွှမ်းသလို ဖြစ်လာပါတယ်… ဒီလိုသာ လူတွေ အသိခေါက်ခက် အဝင်နက်စွာ ပြုမူလို့ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ သစ္စာတရားတော်တွေ ပျောက်ပြီး အမှန် သာသနာကွယ်တာမျိုး မဖြစ်ရအောင် လမ်းမှန်ပြပေးနိုင်သူ များများ ပေါ်ထွက်လာဖို့ လိုပါတယ်…
ze ya said...
ဒီဆောင်းပါးကိုရေးတဲ့သူက အသုံးအနှုန်းတွေ Emotion ဆန်ပါတယ် ဖတ်ကြည့်တာနဲ့ တန်းသိတယ် ဗုဒ္ဓဘာသာ စာပေတွေကို ဘယ်လောက်လေ့လာထားတာလဲဆိုတာကိုပေါ့ ဘာသာတစ်ရားတစ်ခုကို အပေါ်ယံလောက်လေ့လာရုံနဲ့တော့ မလုံလောက်ပါဘူး အာစရိယ ဓမ္မပါလ အကြောင်းကိုလဲ အပေါ်ယံလေး ဖတ်ဖူးတယ်ထင်ပါတယ် သေချာတာကတော့ ဦးဝီရသူကိုတိုက်ခိုက်တာပါ
ဒါပေမယ့် အကြံတစ်ခုပေးချင်ပါတယ် သမိုင်းကြောင်းတစ်ခု ဘာသာတစ်ခုအကြောင်းကို ပြောပြီဆိုရင် အကိုးအကား ( References ) ပါရပါတယ်မိတ်ဆွေ ဒါတောင် ( Primary Srources , Secondary Sources) ရှိသေးတာပဲ ရေးထားတာက သည်းခြေကြိုက်ပါပဲ မသိတဲ့သူ နလပိန်းတုံးတစ်ယောက်အတွက်ကတော့ အထင်ကြီးစရာပါ
ဒါပေမယ့် ဘာကိုးကားချက်မှမပါတဲ့ ညိုထွန်း ဆိုတာကတော့ ကလေးကစားစရာအလုပ်ပါ
အင်တာနက်ခေတ်မှာ ကျောက်သင်ပုန်းမှာ ရေးသလိုရေးလို့ရတဲ့အခြေဆိုတော့လဲ ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူး အေးတကယ်သိချင်ရင် တကယ်ဝေဖန်ချင်ရင် လေ့လာထားပါ ဒီလောက်ကလေးနဲ့တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကို မဝေဖန်ပါနဲ့။